“Amin’izany andro izany dia hanandrandra ny Mpanao azy ny olona, ary ny masony hijery ny Iray Masin’ny Isiraely. “Isa. 17:7
Nampiandraiketana an’i Jesosy ny raki-tsarobidin’ny mandrakizay, mba homeny izay tiany; saingy mampalahelo tokoa fa maro no tsy mahita ny fahasoavana sarobidy natolotra azy ireo amin’ny alalan’ny finoana ao Aminy. Manome ireo harena sarobidin’ny lanitra Izy ho an’ireo izay maniry ny hino sy hibanjina Azy ary hitoetra ao Aminy. Miantso ireo voafidiny Izy, vahoaka manokana izay tia sy manompo Azy, mba hanatona Azy ka hangataka, ary homeny azy ireo ny mofon’aina, ary hamatsy azy ireo amin’ny ranon’aina, izay hitoetra ao amin’izy ireo toy ny loharano miboiboika maharitra hatramin’ny fiainana mandrakizay.
Nentin’i Jesosy teto amin’ny tontolontsika ireo haren’Andriamanitra voaangona, ary izay rehetra mino Azy dia hatsangana ho mpandova Azy. Nolazaina fa lehibe ny valim-pitian’ireo izay miaritra fahoriana noho ny anarany.
Ity tontolo ity dia zara raha toy ny atoma bitika kely iray ao anatin’ny faritra goavambe i zay tarihin’Andriamanitra, nefa dia mbola sarobidy lavitra eo imasony mihoatra noho ireo sivy amby sivifolo izay tsy nania hiala amin’ny andiany ity tontolo bitika lavo ity; Raha maniry ny hanao Azy ho tokintsika isika, dia tsy handao ka hamela antsika ho tonga hazan’ny fakam-panahin’i Satana Izy. Maniry ny fanahy rehetra izay nanoloran’i Kristy ny ainy Andriamanitra mba ho tonga anisan’ilay voaloboka , mifandray amin’ny tahiry fototra , manovo sakafo mahavelona avy amin’izany. Tsy azo ialàna ny fiankinan-dohantsika amin’Andriamanitra , ary tokony hitahhiry antsika amin’ny fanetren-tena lalina izany; ary vokatry ny fiankinantsika Aminy, dia tokony hitombo be tokoa ny fahafantarantsika Azy. Maniry antsika handao ny karazam-pitiavan-tena rehetra Andriamanitra , ka hanatona Azy, tsy amin’ny maha-tompon’ny tenantsika antsika, fa amin’ny maha-fananana voavidin’ny Tompo antsika.
Hanome voninahitra sy hanandratra ireo fanahy rehetra manana fo marina sy feno hafanam-po mikatsaka mikatsaka ny hande amin’ny fahatanterahan’ny fahasoavan’i Kristy Andriamanitra. Ma ve azontsika atao amin-kafanam-po, ny hankasitraka ny herin’ny fampanantenan’Andriamanitra, ka hampifanaraka azy ireo amin’ny tenantsika manokana, tsy hoe satria mendrika isika, fa satria mendrika i Kristy, tsy hoe satria marina isika, fa satria amin’ny alalan’ny finoana velona dia mitalaho ny fahamarinan’i Kristy ho antsika isika?